I-Semalt: Ama-Tricks Awesome Ongayenza Ukungafaki Ukudluliselwa Kokugaxekile
Abasebenzisi be-intanethi bakuthola kukhungathekile ngenkathi bezama ukuthola ukuthi kungani idatha ye-analytics ibonisa amazinga wokunciphisa angalungile, yehlisa izinga lokuguqulwa noma ama-spikes angenangqondo emgwaqweni. Ngaphandle kwezinselele zokubulawa, ukuthunyelwa kogaxekile (okubizwa nangokuthi i-ghost traffic noma i-referrer) yimbangela eyinhloko ye-data engalungile yabasebenzisi be-Google Analytics. Ngaphezu kwalokho, i-spam yofuzo ikhula njalo kokubili nokufinyelela komthamo, futhi ayikwazi ukumiswa nganoma iyiphi indlela.
Abasebenzisi bangakwazi ukuvimba ugaxekile wokudluliselwa kokungabonakali ekuboniseni idatha ye-analytics ngakho-ke babuyisele ubuqotho bemininingwane edingekayo ukuze babike ukusebenza, benze izinqumo zokwazisa ezinolwazi futhi baqoqe ulwazi. Ukusetshenziswa kwesihlungi "esilula" kukwanele ukulahla cishe konke ukugaxekile kogaxekile kuphrofayela ye-Google Analytics.
Kulesi sihloko, u-Igor Gamanenko, i- Semalt uMenenja Wokuphumelela Kwamakhasimende, uchaza incazelo yokudluliselwa kogaxekile ngaphambi kokubhekana nezixazululo zangempela zokuqeda leli gciwane.
Kuyini 'imoto yokuhamba' noma 'ukudluliselwa kogaxekile'
Ukuhamba kwe-Ghost kubhalwe lapho ithrekhi yesayithi itholakale kwenye iwebhu, ngokuvamile, ixhumano ukuthi isivakashi sichofoze..Abakwa-Spammers nabaduni bazama ukulandela ithrekhi yamanga kuphrofayela ye-Google Analytics ukuze banake umsebenzisi obangela ukuba bavakashele iwebhusayithi noma ikhasi elinemoto engafanele, ngokuvamile ukufaka i-malware noma ukuthengisa umkhiqizo. Ukufeza lokhu, ama-fraudsters aqopha ithrekhi yesayithi njengeghost ukuze bakwazi ukufaka i-URL "yokudluliselwa" kanye nesizinda sesayithi labo elihlosiwe noma ikhasi libe yiphrofayli ye-Google Analytics ukuze umsebenzisi abone. Ngaphezu kwalokho, abakwa-spammers bangakha ukungena kwamanga noma basebenzise imicimbi ekhohlisayo kwezinye izilinganiso zamakhasi, isibonelo, ulimi. Kulezi zikhathi, ithrefikhi yokudlulisela phambili yileli gama elinembile kakhulu.
Ukusebenza kogaxekile kokudluliselwa
Isihlungi sokugaxekile sokudluliselwa
Abasebenzisi benza amaphutha ambalwa ngenkathi bezama ukunciphisa noma ukuqeda ugaxekile wokuthutha nokuthunyelwa kogaxekile. Abantu abaningi basebenzisa amaqhinga amaningi nezindlela zokubhekana nalolu daba. Kodwa-ke, kungenzeka ukukhomba ukuthi ugaxekile we-ghost ku-hit eyodwa ngokuqonda ukuthi i-traffic fake ivela kwisayithi besebenzisa igama lomnikazi wefake noma kungabi nhlobo igama lomkhosi. Ngakho-ke, noma iyiphi i-traffic engavumelekile kwiwebhusayithi ingafakwa ngaphandle. Kule ndaba, noma yiliphi igama lomsingeli elingavumelani nesizinda esivumelekile sezindawo ezithile zewebhu lapho ikhodi ye-Google Analytics efakwe ingafakwa ngaphandle kokusetshenziswa kwesihlungi segama lomsingeli.